Uraano - Gpedia, Your Encyclopedia
Muuqaalka meeraha Uraano
Uraano (Af Ingiriis : Uranus) waa meere ka mid ah Bahda Midaysay Qoraxdu.
2 Meerayaasha Baxsan
3 Dayaxyada Uraano
Meeraha Uraano waa kan todobaad ee qoraxda ugu dhow (asagoo u jira masaafo dhan 19.2 AU) iyo 14 jeer muga iyo miisaanka dhulka, kaasi oo ah kan ugu fudud dhammaan meerayaasha Bahda Qoraxdu Midaysay. Uraano wuxuu leeyahay ubuc dhexe oo ka qaboow badan oogada sare. Meeraha Uraano wuxuu leeyahay tirada sadexaad ee ugu badan taasi oo dhan 27 dayax, kuwa ugu waawayni waa Titania, Oberon, Umbriel, Ariel iyo Miranda.
Meereha Uraano wuxuu leeyahay tirada sadexaad ee ugu badan bahda qoraxdu midaysay kuwaas oo dhan 27 dayax.
Qaar ka mid ah Dayaxa Uraano
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Uraano&oldid=173555"